Nanendry Eveka mpanampy ny Papa
Governemanta vaovao : Nampahafantarina ny fomba fiasa
Governemanta vaovao : Ireo fandaharanasa andrasana amin’ny minisitra tsiriray avy
DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA 2020 -70 ROAPOLO SY ROA ARIVO TSIPIKA FITOPOLO manendry ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta
Antananarivo renivohitra : Fampandrosoana aingam-pandeha miaraka amin’i Naina Andriantsitohaina
Art et culture /
Publication : 12 août 2019
Voatendry ho eveka mpanampin’ny diosezin’Antananarivo ny Monsegnera Jean Pascal ANDRIANTSOAVINA. Tetsy amin’ny Kianjaben’ny Mahamasina no namamasinan’ireo Eveka azy omaly.
Tao anatin’ny 4 taona izay no tsy nanana Eveka mpanampy intsony ny Arsevekan’Antananarivo, taorian’ny naha voatendry an’I Monsegneur Jean De Dieu Rawilson ho evekan’Ambatondrazaka. Raha eo amin’ny asa hiantsoroan’ny Arseveka anefa, ny eto andrenivohitra no betsaka mpino katolika indrindra eto Madagasikara satria efa mahatratra roa tapitrisa ny mpino katolika eto amin’ny diosezin’Antananarivo. Handrindra kokoa ny asan’ny Arsevekan’Antananarivo noho izany ny nanendrena an’I Monsegneur Jean Pascal Andriantsoavina ho eveka mpanampy eto amin’ ny Arsidiosezin’Antananarivo.
I Monsegneur Jean Pascal Andriantsoavina dia teraka ny taona 1969 izany hoe 50 taona izy izao voatendry ho eveka mpanampy izao. 19 taona no naha pretra azy ary taorian’izay, voatendry hianatra baiboly tany Roma ny tenany ary naharitra efa-taona izany. Taorian’izay, voatendry ho pére recteur tao amin’ny grand séminaire Antsirabe izy, ary ny taon-dasa teo no voatendry ho pére Curé ny paroasy Imerina Afovoany, ary izao nahazo fiantsoana avy amin’ny Papa Raimasina izao. Marihina fa Papa irery ihany no manana fahefana hanendry eveka ary mbola fahefana avy aminy ihany koa no nahafan’ireo Eveka telo nanamasina an’I Monsegneur Jean Pascal ANDRIANTSOAVINA teny Mahamasina omaly.